Waa Kuma Xiddiga Uu Frank Lampard Saacadaha Ugu Dambeeya Suuqa Sida Gaarka Ah Uga Dalbaday Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich? - Gool24.Net
Waa Kuma Xiddiga Uu Frank Lampard Saacadaha Ugu Dambeeya Suuqa Sida Gaarka Ah Uga Dalbaday Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich?
Tababaraha kooxda Chelsea ee Jose Mourinho ayaa la sheegayaa inuu saxeexa khadka dhexe ee West Ham United ee Declan Rice ka dalbaday mulkiilaha kooxdiisa ee Roman Abramovich kahor inta uusan berrito xidhmin suuqa xagaagan 2020.
Chelsea ayay wali ka go’antahay inay hesho Rice kahor inta uusan suuqu xidhmin berrito, Frank Lampard ayaa taageere weyn u ah 21 sano jirka Hammers waxaana uu rabaa inuu ka dhigo saxeexiisa ugu dambeeya ee uu suuqan ka sameeyo.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Frank Lampard ayaa u sheegay boodhka sarre ee kooxdiisa Chelsea inay bixiyaan waxkasta oo ay ku qaadanayso inay helaan Declan.
Rice ayaa kamid ahaa akaademiga Chelsea balse kooxda laga fasaxay markii uu kaliya 14 sano jir ahaa, da’yarkaas ayaa in ka badan 100 kulan usoo ciyaaray kooxdiisa West Ham United isaga oo joogto uga mid noqday xulka qaranka England.
Il-wareedka xogtan laga helayo ayaa ah 90min oo sheegaya in Frank uu u sheegay Chelsea inay bangiga u jebiso sidii ay da’yarka West Ham ugu keeni lahayd.
Hammers ayaa hore lacag 90 Milyan oo Pound ah u dul-dhigtay xiddigeeda balse tababaraha Chelsea ayuusan qiimahaasi ahayn mid dib u dhigay rabitaankiisa.
Qaar kamida shaqsiyaadka ugu sarreeya Chelsea ayaan ku qanacsanayn samaynta saxeexa Rice balse suurogalnimada ay kooxdu ugu dhaqaaqi karto saacadaha ugu dambeeya ee suuqa ayaa ah mid sarreysa.
Dhinaca kale West Ham United ayaa la fahamsan yahay inay xiiso u qabto xiddiga Chelsea ee Ruben Loftus-Cheek kaas oo xulashada Lampard hoos uga dhacay.
Blues ayaa dhinacooda ka doonaya xiddigo ay uga leexan karaan Rice, bur-buriyaha Atletico Madrid ee Thomas Partey oo ay Arsenal dhinaceeda ka doonayso ayaa kamida xiddigaha lala xidhiidhinayo.
We need rice
Jose Mourinho kulaha benta